Ixesha kunye nabahlobo 23
"I-Astral world" kunye "nehlabathi lokomoya" ayizobizo ezifanayo. Ayinakusetyenziswa ngulowo uqhelana nomxholo. Ilizwe le-astral lilizwe lokubonakalisa. Kuyo umhlaba wenyama kunye nayo yonke imisebenzi eyenziwa ngokwasemzimbeni ibonakalisiwe, kwaye ngaphakathi kwe-astral ibonakaliswa ziingcinga zehlabathi lengqondo, kwaye, ngomhlaba wengqondo, izimvo zokomoya. Umhlaba wokomoya ukwindawo zonke izinto ezaziwa ukuba zinjengoko zinjalo, akukho nkohliso inokwenziwa kwaba bantu baphila ngesazela kuyo. Ilizwe lokomoya likwindawo apho umntu angena khona, angafumani mbhodlo, kodwa uyazi kwaye uyaziwa. Iimpawu ezahlukileyo zehlabathi zombini zinqwenela kunye nolwazi. Umnqweno ligunya elilawulayo kwihlabathi le-astral. Ulwazi ngumgaqo olawulayo kwihlabathi lokomoya. Iibhedi zihlala kwihlabathi le-astral njengoko izilwanyana zihlala kwihlabathi langempela. Bashukunyiswa kwaye bakhokelwa ngumnqweno. Abanye abantu bahlala kwilizwe lokomoya kwaye bashukunyiswa lulwazi. Ngelixa umntu edidekile kwaye engaqinisekanga ngento angayidingi ukuba "unengqondo yokomoya," nangona kunjalo kunokwenzeka Umntu onokungena kwihlabathi lokomoya lolwazi akakho kwimeko yokungazi ngayo. Akanqweneli ukuba njalo, okanye aqagele, okanye akholwe, okanye acinge ukuba uyazi. Ukuba uyawazi umhlaba wokomoya lulwazi kunye naye hayi olokuqagela. Umahluko phakathi kwehlabathi le-astral kunye nehlabathi lokomoya ngumahluko okhoyo phakathi komnqweno kunye nolwazi.
Akukho lungu lisemzimbeni linobukrelekrele nangona amalungu onke esazi. Isakhiwo ngasinye sehlabathi kufuneka sazi ukuba sinomsebenzi owenzayo. Ukuba ibingayazi into yokusebenza kwayo ngekhe ikwenze. Kodwa ilungu alibobukrelekrele ukuba ngobukrelekrele lithetha iziko elinengqondo. Ngobukreqo sithetha umntu ongaphezulu, kodwa ongaphantsi, kunommntu. Amalungu omzimba awangabukrelekrele, kodwa asebenza phantsi kokhokelo olubonakalayo. Lungu ngalinye emzimbeni lilawulwa liziko eliyaziyo into ethile eyenziwa lilungu. Ngalo msebenzi wazi ukuba amalungu abangela iiseli kunye neemolekyuli kunye neeathom eziyila yona, ukuba negalelo emsebenzini ekusebenzeni kwento ephilayo. I-atom nganye engena kwisimo seimolekyuli ilawulwa liziko eliziqondayo le molekyuli. Imolekyuli nganye engena ekwiseli ilawulwa yimpembelelo yeeseli. Iseli nganye eyila ubume bezinto elawulwa lilungu lezinto ezisebenza emzimbeni, ilungu ngalinye njengenxalenye yombutho lilawulwa ngumgaqo-siseko wolungelelwaniso olwaziyo olawula umbutho womzimba uphela. Iatom, imolekyuli, iseli, ilungu ngalinye lazi nto kwicandelo ngalinye lesenzo. Kodwa akukho nanye kwezi inokutshiwo njengebukrelekrele nangona benza umsebenzi wabo kumacandelo abo ohlukileyo wentshukumo ngokuchanekileyo.
Ingqondo inemisebenzi esixhenxe, kodwa umzimba unamalungu amakhulu. Ke ngoko, ayililo ilungu ngalinye elinokumela okanye elinokumelwa ngumsebenzi othile wengqondo. Amalungu omzimba anokwahlulwa abe ziiklasi ezininzi. Ukwahlula kuqala kunokwenziwa ngokuhlula amalungu anakho, njengomsebenzi wawo wokuqala ukhathalelo kunye nokugcinwa komzimba. Phakathi kwezi kuza kuqala amalungu abandakanyeka ekugayeni nasekuthambiseni. La malungu, njengesisu, isibindi, izintso kunye nomqolo zikwindawo esiswini yomzimba. Okulandelayo zezi zikwindawo eyi-thoracic cavity, yentliziyo kunye nemiphunga, ezinento yokwenza nokukhutshelwa kweoksijini kunye nokucocwa kwegazi. La malungu asebenza ngokungazenzisiyo ngaphandle kolawulo lwengqondo. Phakathi kwamalungu adibene nengqondo ngokuyintloko yimizimba yengqondo kunye ne-pineal gland kunye namanye amalungu angaphakathi engqondo. Umntu ophulukene nokusetyenziswa kwengqondo yakhe,, enyanisweni, uya kuvela kwiimviwo ukuba amanye ala malungu achaphazelekile. Ubuvila bunokubangelwa yenye okanye ezininzi izizathu. Ngamanye amaxesha unobangela okhawulezileyo ungokwasemzimbeni kuphela, okanye unokuba ngenxa yemeko ethile engaqhelekanga ngokwasemphefumlweni, okanye ukuhlambalaza kunokubangelwa yingqondo yokuba ushiye ngokupheleleyo kwaye umkile emntwini. Ukudakumba kunokuziswa ngenxa yesizathu esithile somzimba, njengesifo selungu elinye lamalungu engqondo, okanye ngemeko engaqhelekanga okanye ilahleko yeglandra. Ukuba nawaphi na amalungu adibene nengqondo, okanye ingqondo isebenza kuwo umzimba wenyama, ilahlekile okanye isenzo sabo saphazanyiswa, ingqondo ayinakusebenza ngokuthe ngqo nangomzimba wenyama, nangona inokunxibelelana nayo . Ingqondo ke ifana nebhayisikile enomatshini ophulukene neziseko zayo, kwaye phezu kwayo, ayinakuyiqhuba. Okanye ingqondo inokufaniswa nomntu okhwele ihashe, kodwa iingalo nemilenze ibotshelelwe kwaye umlomo wakhe ugungxekile ukuze angakwazi ukuqondisa isilwanyana. Ngenxa yothando oluthile okanye ukuphulukana ilungu lomzimba ngengqondo elisebenza ngalo okanye ngokulawula umzimba, ingqondo inokunxibelelana nomzimba kodwa ingakwazi ukuwalikhokela.